Dalal ay kujirto Soomaaliya Oo Lacag Mallaayiin dollar ah oo loogu deeqay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dalal ay kujirto Soomaaliya Oo Lacag Mallaayiin dollar ah oo loogu deeqay
Dalal ay kujirto Soomaaliya Oo Lacag Mallaayiin dollar ah oo loogu deeqay
Waxaa magaalada London ee dalka ingiriiska lagu soo geba-gabeeyay shirka horumarinta Arrimaha waxbarashada, kaas oo muddo lab cisho ah socday, isla markaana looga hadlayay horumarinta iyo saro u qaadida waxbarashada.
Shirk ayaa waxaa ka qeyb galay madax farabadan oo ka socota dalalka Caalamka, waxaana Soomaaliya uga qeyb galay wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Hayeeshee Shirka ayaa waxaa looga dhawaaqay lacag dhan 5 Bilyan oo Dollar, taas oo lagu horumarinayo Waxbarashada 90 dal oo ay Soomaaliya kujirto, sida uu Goobta shirka kaga dhawaaqay Wasiirka Arrimaha dibadda dowladda Britain.
Qaar kamid ah madaxda ka qeyb gashay shirka ayaa aad u soo dhaweeyay lacagta Shanta Bilyanka ah ee loogu deeqay, taas oo loogu talo galay in dalalka waxbarashadooda liidato lagu hormariyo, iyaga oo sheegay in lacagtaas sidii loogu talo galay ay u isticmaali doonaan.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo weli ku sugan magalada London ayaa halkaasi waxaa uu ka wadaa kulamo kala duwna oo uu la qaadanayo Madaxda ka qeyb gashay shirka horumarinta Arrimaha waxbarashada.